Microsoft inotsanangura mashandiro eEFI, iyo inopokana boot system | Linux Vakapindwa muropa
Microsoft inotsanangura mashandiro eEFI, iyo inopokana boot system
edumix | | Linux vs. Windows, Noticias
Nezuro chaiye takazivisa izvozvo Windows 8 inogona kusabvumidza kuiswa kweLinux pamakomputa matsva. Zvakanaka, zvinoita sekudaro Microsoft Hazvina kutora nguva yakareba kuti zvipindure runyerekupe rwuri kutenderera pa network, uye kuyedza kutsanangura mashandiro eiyo gakava rekutanga system UEFI (Unified Extensible Firmware Interface). Panyaya iyi, kambani inotaura kuti inogona kuvhurwa (kana kwete) zvinoenderana nezvinangwa zvevanogadzira michina nevashandisi.
Sezvakataurwa Europa Press:
Microsoft yaida kupedza kupokana nekutsanangura zvakadzama mashandiro echokwadi eEFI. Ivo vanobva Redmond vanotaura pane yepamutemo Kuvaka Windows 8 blog kuti UEFI inzira yekudzivirira yakavakirwa mune yavo nyowani yekushandisa system. Iyi sisitimu inomhanya kana iwe ukavhura komputa uye ichidzivirira kupindirana OS isati yazara zvizere.
Kushandisa UEFI kwaizodzivirira imwe sisitimu yekushandisa kubva kubhoti. Kazhinji, vashandisi vanoda kuisa yechipiri system pakombuta yavo, vanoita mashandiro nenzira yekuti kana komputa painotanga inobvumidza kusarudza pakati pemasisitimu. NaEFI mukana iwoyo unobviswa kunze, uye ndiwo makakatanwa.
Kubva kuMicrosoft vanosimbisa kuti sisitimu inoshanda nenzira iyi uye kuti inovavarira kuchengetedza kuchengetedzeka kwemakomputa kunyangwe panguva yavanotambura, pakutanga. Iyo kambani inovimbisa kuti ichi ndicho chinangwa chayo uye pasina mhaka inoitirwa kudzivirira kana kurambidza kuiswa kweimwe masisitimu.
Muchokwadi, Microsoft inosimbisa kuti kushandiswa kweEFI haisi yekumanikidza uye kuti vagadziri vemidziyo nevashandisi vanogona kusarudza kuti vokushandisa here kana kuti kwete. Nenzira iyi, basa racho rinogona kudzimwa, richirasikirwa nekuchengeteka asi richichengeta sarudzo dzekushandisa mamwe masisitimu.
“Microsoft inotsigira kuti vagadziri vezvishandiso vane mukana wekusarudza kuti ndiani anotarisira zvitupa zvekuchengetedza uye kuti vanobvumidza sei vatengi kupinza nekugadzirisa zvitupa nekuchengetedza bhutsu manejimendi. "Tinotenda kuti zvakakosha kutsigira kuchinjika kweOEMs uye nekubvumira vatengi vedu kuti vasarudze maitiro avari kuda kufambisa masisitimu avo," anodaro Redmond.
Mune mamwe mazwi, iyo brown kune vagadziri ... heino izvo!
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Microsoft inotsanangura mashandiro eEFI, iyo inopokana boot system
Microsoft iri kuwedzera kunzwira tsitsi. Nzira chete yavanofanira kuramba vakabata vashandisi vevasungwa ndeyekudzima bhutsu mbiri nemamwe masisitimu, Linux, semuenzaniso.
Ini handitendi mumakakatanwa, asi zviri pachena kuti Microsoft inoziva zvazvinoreva kune mamwe masisitimu, kana vakazviita nemaune kana kwete, hatife takaziva izvozvo.
Chinhu chinogadzira chinondiseka, ndiani acharamba? Uye mushandisi, vangani vacharamba kuchengetedzeka?
Chero hazvo ... mune chero mamiriro ezvinhu ivo "vakatitamba" isu, kutaura zvishoma.
Microsoft ishiti, uye vanozviita nechinangwa chekudzivirira kufambira mberi kweLinux kana chero imwe OS
Pindura kuna hilario
akaipa windows windows, unotyei, kana alfin na al cavo vhura mumwe munhu kuti amuputse kubva kumakore ake, asi iyi ihondo yemasystem, pz vatove mu korea varikumhanya ubunto mune ese pc inogadzirwa hehehe
Pindura kuna kamacho
Chii chinonzi yemahara software? Richard Stallman pachake anozvitsanangurira kwauri